1: Izindaba Ezivuzayo | Isisekelo Somvuzo: Uthando, Ubulili ne-Intanethi
Ikhaya Cha. Izindaba ze-1 zokuvuza
Kuningi okwenzekayo eThe Reward Foundation, ngakho-ke sinqume ukwethula 'Izindaba Ezinomvuzo' njengeqoqo lezindaba ezizovela kasithupha ngonyaka kunokuba kube ngekota. Sibhala i-tweet nsuku zonke ngangokunokwenzeka futhi senza nezindaba zezindaba zamasonto onke futhi. Uma kukhona ongathanda ukusibona sikumboza, vele usho kanjalo. Yonke impendulo yamukelekile kuMary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Isikhwama se-Big Lottery
"Apple, Google, Facebook? Ziyizinto ezidayiswa izidakamizwa "
Ukuzihawukela: Ukubukeza Incwadi
Kude isikhathi eside, ukuhlehlisa ...
Xhuma phakathi kwe-Porn nesizungu
Porn ngaphakathi Ubudlelwano
I-ePhalamende yaseScottish Education and Skills 'Paper ku-PSHE
IZINDABA, ama-VIEWS ne-INTERVIEWS
I-Reward Foundation ijabulise ukumemezela ukuthi ithole umklomelo ovela ku Ukutshala imali kumibono ukusakaza kweSikhwama se-Big Lottery. Iphrojekthi yethu inesihloko esithi 'siyini-ithi-on-the-tin' Ukukhulisa Ukuqwashisa Izithombe Zobulili Ezingcolile Ziyingozi Phakathi Kwabasha eScotland. Inhloso ukuthuthukisa izinhlelo zezifundo ezikoleni njengengxenye yohlelo lwe-Personal & Social Health Education (PSHE).
Sizogxila kumandla we-porn wokuvuselela ngokweqile ubuchopho ngemithelela empilweni yengqondo nengokwenyama, ukutholakala, ubudlelwano nobugebengu. Sizophinda futhi sisayine izindlela zokuyeka izithombe zobulili ezingcolile futhi sakhe amandla okuqina. Kuyasijabulisa ukuba namathalente othisha nabafundi abambalwa abakhona ukusisiza sithuthukise izinto ezijabulisayo, ezisebenzisanayo nezifanele iminyaka.
Funda lokhu okuhle kakhulu esihlokweni mayelana nokuthi i-Facebook iqondisa kanjani ubuchopho bakho ngokoqobo. Abakwa-Tech bavakashela ukuthi abafana abakhulu basebenzisa kanjani amathuba okucindezeleka ngokomzwelo ukuze basicindezele futhi basenze sibuyele emuva. Benza izigidigidi futhi thina, ikakhulukazi intsha, singaqeda ukucindezeleka, ukukhathazeka nokunganeliseki ngokuphila.
Silokhu simatasa ngephothifoliyo yethu yezingxoxo zevidiyo. Senza omusha nomdlali omusha ozayo no-Robbie Gordon waseScotland Wonder Foolsinkampani yaseshashalazini kanye noChristian McNeill, umqeqeshi okhuthazayo okhuthazayo Izinto zokwenza kahle. Besilokhu siqala nenqubo ehamba kancane yokufunda ukuthi ungawahlela kanjani amavidiyo. Uhlelo lwethu ukuthi ezinye zalezi zingxoxo zenziwe kuwebhusayithi emasontweni ambalwa ezayo. Sizokwenza i-tweet uma be-inthanethi.
Singathanda ukuncoma incwadi enhle kakhulu ebizwa ngokuthi Ukuzihawukela - Yeka ukuzishaya uphinde ushiye ukungavikeleki ngemuva kwalokho nguprofesa wokuthuthukiswa komuntu uKristin Neff. Sasizwa uKristen ekhuluma ngencwadi yakhe emhlanganweni wonyaka odlule futhi bahlaba umxhwele. Kuye kwadingeka ukuba anqobe ezinye izinkinga zangempela empilweni yakhe ngakho akuyona nje inkolelo. Le ncwadi inikeza isisombululo esinamandla sokulwa nokucindezeleka, ukukhathazeka nokuzigxeka okuvela ngokuhlala emphakathini ocindezelwayo nokuncintisana. Kukhona ukuzivivinya okuvivinywe nokuvivinya nokulandwa komsindo okutholakala mahhala. Yincwadi ebandakanya futhi ewusizo.
Kude isikhathi eside, ukuhlukana...
I-TRF ivalelise uJamie Wright noDavid Martin, laba bafundi ababekwe eNapier University kulo nyaka. Bebesisiza ngokuthuthuka kwewebhusayithi yethu futhi siyethemba ukuthi ibazuzele ulwazi lomsebenzi oluwusizo. Sikufisela inhlanhla esigabeni esilandelayo somsebenzi wabo.
LOKHO IZINQUBO ZOKUBA ZIYINI ...
Kukhona manje ubufakazi ukuthi ukuphululwa nguzakwethu kumnandi kakhulu kunokuphulula omunye umuntu noma wena. Ukushaywa kudambisa izinga lokushaya kwenhliziyo. Lokhu kuyinto okumele i-NHS icabangele njengenye indlela yezindleko eziphakeme kanye nemiphumela emibi yezidakamizwa. Ixhumeka kahle kulokho esikwaziyo ngokuziphatha okuhlanganisayo. Bheka lapha ngendatshana ethokozisayo ebizwa ngokuthi "Indlela Evilaphayo Yokuhlala Othandweni" elandisa kabanzi ngomlingo wokuziphatha okuhlanganisayo.
Yikuphi okuza kuqala, i-porn noma isizungu? Kulokhu ucwaningo labo ababuka izithombe zobulili ezingcolile babesengozini enkulu yokuba nesizungu, futhi labo ababebhekene nesizungu babevame kakhulu ukubuka izithombe ezingcolile. Lokhu okutholakele kuyahambisana nokucwaninga okuxhumanisa ukusetshenziswa kwezithombe zocansi ekuthinteni / emizweni emibi.
Uyini umphumela we-porn emibhangqwaneni? Nazi ezinye izingcaphuno ezivela kufayela le- ukutadisha okusha okubalulekile eholwa nguPaul J. Wright:
"Ukukhetha izithombe zobulili ezingcolile nokuzijabulisa ngokobulili nokuhlukanisa ukuxhumana ngokobulili kokubili kuhlotshaniswa nokwaneliseka okuncane ngokocansi."
"Ngokuvamile izithombe zobulili ezingcolile zisetshenziswa njengethuluzi lokuvusa ukushaya indlwabu, lapho umuntu engase abe nomuntu ongenalo ucansi ngokungafani neminye imithombo yokuvusa ucansi."
"Sithole ukuthi abesilisa nabesifazane abancane baxabisa ukukhulumisana ngokocansi, ukwaneliseka okungokwenziwe ngokobulili okwakungaphansi kobufakazi babo."
Ngo-Ephreli 2017, umthetho omusha wokuziphindiselela kwezithombe zobulili eScotland waqala ukusebenza ngaphansi Ukuziphatha Okuhlukumezayo Nokulawulwa Ngokwemvelo ngokobulili 2016. Isijeziso esiphezulu sokudalula noma ukusongela ukudalula isithombe esiseduze noma ividiyo yisiboshwa se-5 iminyaka. Icala lihlanganisa izithombe ezithathwe ngasese lapho othile ede noma engaphansi kwezingubo zangaphansi noma ebonisa umuntu owenza isenzo socansi. Funda kabanzi lapha.
Ikomidi lezemfundo ePhalamende laseScotland kanye neKomidi lisanda kushicilela umbiko walo ngezocansi kanye nokufundisa ubudlelwane. Abafundi bathi bafuna izifundo zihambe ngaphezu kwe-biology futhi zikhulume kabanzi mayelana nobuhlobo. I-Foundation Foundation izimisele ukufaka isandla esixazululweni. Umklomelo we-Big Lottery Fund uzosisiza ukuba sizuze lokho. (Bheka ngenhla) Imininingwane eminingi ephepheni lekomidi ingabonakala lapha.
Uthola le imeyili ngoba ukhethe ukungena kwiwebsite yethu www.rewardfoundation.org.
Ikheli lethu leposi liyi: